एक्कासी के भयो ७ वर्षीया अदीतिलाई ? सानो गल्तीले यो रमाइलो संसारबाट सदाको लागि बिदा हुनु पर्यो, अदीतिको विदाईसँगै परिवारमा रुवाबासी, हे भगवान् यसरी खुशी परिवारको खुशी किन चुँड्छस् ? – Gazabkonews
एक्कासी के भयो ७ वर्षीया अदीतिलाई ? सानो गल्तीले यो रमाइलो संसारबाट सदाको लागि बिदा हुनु पर्यो, अदीतिको विदाईसँगै परिवारमा रुवाबासी, हे भगवान् यसरी खुशी परिवारको खुशी किन चुँड्छस् ?
विराटनगर : मोरङको उर्लाबारीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट शनिबार साँझ एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परेर उर्लाबारी नगरपालिका–८ की बीपीसा ओझाकी छोरी ७ वर्षीया अदीति ओझाको मृत्यु भएको हो।
उनका अनुसार दिउँसो ३:३० बजेतिर उत्तरतर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा बालिका गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। उनको उपचारका क्रममा साँझ ७:३० बजेतिर विराटनगरको विराट नर्सिङ होम एवं विराटनगर अस्पतालमा मृत्यु भएको एसपी शर्माको भनाइ छ।
दुर्घटनामा परेर मोटरसाइकल चालक उर्लाबारी–५ का ५० वर्षीय विनोद अग्रवाल पनि सामान्य घाइते भएका छन्। उनको प्रहरी निगरानीमा गोदावरी अस्पताल उर्लाबारीमा उपचार भइरहेको छ। घटनाको अनुसन्धान थालेको प्रहरीले मोटरसाइकल भने नियन्त्रणमा लिएको छ।
महान् श्रीमान् बिनोदको जिन्दगीमा फर्कियो खुशी ठिक भइन् अनिता